Ukuhlanganiswa kwefilimu ye-Carbon
Ukudluliswa kwefilimu ye-carbon carbon kuyinto evamile namhlanje, kepha ukuphakama kwayo kudlulile isikhathi eside. Kodwa kusekhona labo abakubheka njengokukhangayo nokuhle. Ngakho-ke, kulesi sihloko ngizokutshela ukuthi ifilimu idonswa kanjani nefilimu. I-Carbon uhlobo oludumile kakhulu lwefilimu ye-vinyl. It has surface relief futhi ibonakala engavamile.
Ngaphambi kokuba uqhubekele ekufakeni, kufanele uqale ukulungisa imoto yale ndawo. Ngakho-ke, uzodinga umshini wokugcoba nokupholisa ukunamathisela (lokhu kuyinto ekahle, kodwa, kodwa ungayenza ngaphandle kokupholisa), i-degreaser (ungasebenzisa utshwala obuvamile obuvamile , umoya omhlophe noma ezimweni ezimbi kakhulu uma ungazisoli ngemidwebo yemoto yakho) Kanye nesendwangu esingenalutho . Uma uhloswe ngomphumela omuhle (njengama-worksshops ochwepheshe), khona-ke kudingeka ugeze imoto, uphezulu ubuso bomzimba wayo. Uma uzenza lokhu ngokwakho, uzodinga ukunamathiswa kwezinhlobonhlobo zezinhlobo ezintathu ezinama-abrasives ahlukene (kusukela kunkulu kuya kokusanhlamvu okuncane kakhulu). Eminye imininingwane, isibonelo i-hood, sibeka inani elincane lokunamathisela kanye nokunyakaza okuyisigxina "ukusihliza" ngaphakathi. Bese ususa unamathisele ngokweqile, phinda inqubo izikhathi ezingu-2 ngaphezulu. Ngemuva kokuba imoto ipholile, kuyadingeka ukuthi ekugcineni ulahle izinsalela ze-paste, bese uphazamisa ubuso ngotshwala kanye ne-napkin. Ukulungiselela sekuphelile. Okulandelayo, udinga igumbi lokushisa lokufudumele, okungcono lihlanzekile futhi likhazimule.
Ukunamathisela nge-carbon film
Ukuze uqhubeke nokunamathisela, kufanele uqale ulungise wonke amathuluzi adingekayo. Ngakho, uzodinga:
Ifilimu, isiqalile kakade ubukhulu besigaba ngasinye. Kusadingeka ukucacisa ukuthi ingxenye eyodwa ihlanganiswe nengxenye eyodwa yefilimu. Lokhu kungukuthi, awukwazi ukumboza ihood nge-half halves, kubalulekile ukuthi ube ne-canvas eyodwa yobukhulu obufanele (enekhasi).
Ukubhala noma ummese okhethekile wefilimu (Ngisebenzisa i-OLFA ngamacu aguquguqukayo).
I-Rakeli (uzizwa, i-raber kanye nendawo encane iphinde ibe mncane ekuqedeni amaphutha).
Isomisi sezinwele zezimboni, mhlawumbe ngezindlela ezahlukene.
Isixazululo sosipho kanye ne-sprayer (uma ubhekene nesigaba esiyinkimbinkimbi, isibonelo, i-bumper noma i-hood ene-surface engalingani).
Futhi umlingani, ngoba konke okungaphezu kwesibuko noma isibalo, kunzima kakhulu ukunamathela umuntu oyedwa kumuntu, ikakhulukazi uma ukwenza okokuqala.
Ngakho-ke, uqala ukukhishwa kwefilimu yekhabhoni yemoto.
Ukudlulisa ngefilimu ye-carbon akuyona inzima, uma uyibeka ehlathini noma ophahleni. Kodwa uma kuziwa ku-bumper, kuzodingeka ngizame. Ngizokutshela ngezindlela ezimbili ezahlukene zokusebenzisa ifilimu kancanyana. Uma unesithakazelo futhi uzofisa, ungafunda izincwadi eziningi ezengeziwe.
Ibizwa ngokuthi (iyaqonda kahle) imanzi, ngoba ifilimu ihlanganiswe nesisombululo se-soapy (idinga amanzi ajwayelekile kanye ne -agent ehlanza ukudla, ehlanjululwa emanzini, exutshwe futhi efakwe endaweni yomsebenzi ngephilisi). Ngemuva kwemisebenzi yokulungiselela, siyaqhubeka nenqubo ngokwayo. Ingxenye yokusebenza yemoto iphathwa ngesisombululo sensipho, i. Sibeka eceleni (ikakhulukazi, kungcono futhi kulula ukusebenza ngendaba), sihlukanisa i-substrate evela ku-ifilimu, kodwa sizama ukungayitholi, kungenjalo kuyoba nzima ukuyikhipha. Ngemuva kwalokho, sisebenzisa isixazululo sefilimu ngokwayo, ngenkathi siyibeka esimweni sokuma, ukuze kungabikho nhlobo imfucumfucu eyengeziwe. Ngemuva kokwelashwa ngesisombululo, sisebenzisa ifilimu engxenyeni bese siqala ukucindezela i-squeegee kusukela phakathi kuya emaphethelweni kancane kancane, ngokushelela. Uma ngabe ihood, khona-ke kusukela e-hood centre kuya emaphethelweni. Uma kukhona izingxenye zomzimba ze-convex, i-dryer yezinwele zezimboni zifudumala lezi zindawo futhi i-squeegee squeegee. Ngemuva kokuthi ifilimu ihlanganisiwe, kuyadingeka ukuthi umise emaphethelweni ngesomisi sezinwele, bese ugoba noma unciphisa ngokweqile. Kwenziwe.
Ukuhambisa nge-carbon film kungenziwa ngendlela ehlukile. Kuyinto efanelekile kakhulu kule ndaba noma kulabo abangesabi ukuthatha izingozi. Isibonelo, thatha ihood. Sihlanza indawo yayo, susa i-substrate kwifilimu futhi, ngaphandle kokuyisebenzisa ngokuphelele, gxilisa kuphela umugqa phakathi. Kulesi simo, kubalulekile ukuthi umuntu oyedwa abambe inhlangothi eyodwa yefilimu futhi angamvumeli ukuba aqambe ngokuphelele ohlangothini olulodwa, nomunye umuntu komunye. Khona-ke, nge-squeegee ezwayo, sihamba kancane kancane ifilimu kusukela phakathi kuya emaphethelweni, sishaya umoya wonke. Izikhonkwane zibuye zishiswe ngomshini wezinwele. Kodwa-ke, ifilimu ayikwazi ukudlula, ingancibilika noma idwengulwe. Kuyinto engafanele ukugoba noma ukusika ngommese.
Unombono ojwayelekile wokuthi ungafaka kanjani imoto ngefilimu ye-vinyl.
Uwoyela Zokwenziwa. Izinzuzo main
"Moskvich 434": ezibekiweko lobuchwepheshe, izithombe
Iziqinisekiso zemoto. Isikhathi sokulungisa imoto ngaphansi kwewaranti
Yini i-sodium tetraborate, futhi amanye awo ezinhle?
Indlela ukupheka inhlama for pancake nobisi?
Mixer Bosch MFQ 3560: izici, imiyalelo yokusebenzisa, ukubuyekezwa
Puzzle-Chinese izingane kanye nabantu abadala
Equkethe carbohydrate: ekutholeni ilungelo umthombo wamandla
Ukuzivocavoca emva kokubeletha. Zinike ukuba amahle kakhulu futhi umama mncane kakhulu!
Ithoyizi Interactive hamster povtoryushka